Thu, Sep 19, 2019 at 4:41am
शुक्रबार, २४ जेष्ठ २०७६,	– गोपालप्रसाद बराल.
बर्दिवास, २४ जेठ
बलौटे जग्गा भएर के भयो र ! महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका–६ को पर्सा र सग्रामपुरका किसानको मिहिनेतले २०५ बिघा बलौटे जग्गामै फलपूmलका बिरुवा लहलहाएका छन्, तरकारी बाली फस्टाएको छ । त्यसैगरी, भङ्गाहा–७ का भूमिहीन दलितले पनि पछिल्ला चार वर्षयता बगरको पर्ति ऐलानी जग्गामा तरकारी बाली लगाएर मनग्य कमाउन थालेका छन् ।
विगतमा रातु नदीको बाढीले उर्बर जग्गा काटेर बगर बनाएपछि सुकुम्बासी बनेका किसान पछिल्ला चार वर्षयता सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल, बर्दिवासको साथ पाएपछि बगरमै सुन फलाउने भएका छन् ।
पैरवी मञ्चले बगर खेती गर्न किसानलाई उत्प्रेरित गरेपछि पछिल्ला चार वर्षयता आदिवासी थारु अब्बल किसानमा दरिएका छन् ।
बगर बगैंचा र तरकारी खेतीमा रमेका किसानले बलौटे बगर खेतमा सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नपुगेको गुनासो गरेका छन् ।